စည်းမျဉ်းများနှင့်အခြေအနေများ - ဆေးခြောက်စက်မှုရှေ့နေ၊ လိုင်စင်ရဆေးခြောက်အတွက်စီးပွားရေးရှေ့နေများ
MASTER ၀ န်ဆောင်မှုသဘောတူညီချက်များ
ဤ MASTER ၀ န်ဆောင်မှုသဘောတူညီချက် (ဤ "သဘောတူညီချက်”) ကိုထုတ်လုပ်ပြီး ၀ ယ်ယူသည့် နေ့မှစ၍ ထည့်သွင်းသည်။ထိရောက်သောနေ့ရက်“)၊ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်၊ အကန့်အသတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီ (Collateral Base, LLC) အကြား၊အကြံပေး") နှင့်မည်သည့် ၀ ယ်သူမဆိုဖောက်သည်"အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် စုပေါင်း၍" ပါတီများ ") ဟုရည်ညွန်းသည်။
ဖောက်သည်သည်အတိုင်ပင်ခံအားဤသဘောတူညီချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ၀ န်ဆောင်မှုအချို့ကိုအခါအားလျော်စွာလုပ်ဆောင်ရန်ဆန္ဒရှိသည်။
ဖောက်သည်များသည်ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အားဤသဘောတူညီချက်ပါ ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန် ၀ န်ဆောင်မှုပေးလိုသည်။ နှင့်
လုပ်ငန်းများ၏ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအတိုင်ပင်ခံ၏ဉာဏပစ္စည်းမှထုတ်လုပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ဤသဘောတူညီချက်အားဖြင့်ကန့်သတ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ Client ကသဘောတူသည်နှင့်အလုပ်၏ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်၏ဘောင်၏အပြင်ဘက်ရှိမည်သည့်အပြောင်းအလဲကိုမဆိုအနာဂတ်အလုပ်၏ထုတ်ပြန်ချက်များတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောအမိန့်များအတိုင်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဤသဘောတူညီချက်တွင်အခြားအဓိပ္ပာယ်ဖွင့် ဆို၍ မသုံးသောစာလုံးအကြီးအက္ခရာများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဓိပ္ပာယ်များရှိရမည်။
"Affiliateဆိုလိုသည်မှာယခုဖြစ်စေ၊ နောင်တွင်ဖြစ်စေ၊ ကြားခံတစ်ခု (သို့) သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေ၊ တစ်ခုထက်မကသောသွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေ၊ ကန့်သတ်ထားသော၊ ကန့်သတ်ထားသောတာဝန်ယူမှု၊ ၀ ယ်သူနှင့်အတူဘုံထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီများ၊ မိတ်ဖက်များ) ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အတိုင်းထိန်းချုပ်မှုဟူသောအသုံးအနှုန်းသည်စုစုပေါင်းမဲ ၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အထက်ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိအစုရှယ်ယာများသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားအားလုံး၏တန်ဖိုးများ၊ သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်း၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်မူဝါဒများကိုညွှန်ကြားပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။ စာချုပ်သို့မဟုတ်အခြား
"လျှို့ဝှက်အချက်အလက်၀ ယ်သူသို့မဟုတ်အတိုင်ပင်ခံ၏အရောင်းအ ၀ ယ်တွင်ယေဘုယျအားဖြင့်မသိသောဤသဘောတူညီချက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော) ကဲ့သို့အသိဥာဏ်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုများအပါအ ၀ င်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုဆိုလိုသည်။ (သို့) မည်သည့်အလတ်စားတွင်မဆိုမည်သည့်အလယ်အလတ်တွင်မဆို၊ အနာဂတ်နှင့်အဆိုပြုထားသောထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ၎င်းတို့၏လက်အောက်ခံများ (သို့) ၎င်းတို့၏လက်အောက်ခံများ (သို့) လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများ (သို့) ကုန်သွယ်ရေး၊ လျှို့ဝှက်ချက်များ၊ ပုံများ၊ တီထွင်မှုများ၊ သိကောင်းစရာများ၊ software ပရိုဂရမ်များနှင့် software အရင်းအမြစ်စာရွက်စာတမ်းများ၊ (ဂ) သုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ၀ န်ဆောင်မှုသစ်များ၊ ထုတ်ကုန်အသစ်များ၊ စျေးကွက်နှင့်ရောင်းခြင်း၊ စီးပွားရေးအစီအစဉ်များ၊ စီးပွားရေးခန့်မှန်းချက်များ၊ ဘတ်ဂျက်များနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းမရှိသောဘဏ္statementsာရေးရှင်းတမ်းများ၊ လိုင်စင်များနှင့်ဖြန့်ဖြူးမှုအစီအစဉ်များ ()) ၀ န်ထမ်းများ၊ ကန်ထရိုက်များ (သို့) ပါတီ၏အခြားကိုယ်စားလှယ်များ၊ ၎င်းတို့၏လက်အောက်ခံများ (သို့) လက်အောက်ခံများ၊ နှင့် (င) အတိုင်ပင်ခံမှပေးအပ်သောအရာများနှင့်အလုပ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း၏ဖော်ပြချက် (များ) မှအလုပ်မှထွက်ပေါ်လာခြင်း လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်များသည် ၀ န်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်စဉ်ကာလအတွင်းဤအချက်အလက်များအား Client (သို့) အတိုင်ပင်ခံသို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားနိုင်သောမည်သည့်တတိယအဖွဲ့အစည်း၏မဆိုပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်များလည်းပါဝင်သည်။
"အတိုင်ပင်ခံပို့ဆောင်မှု“ ဤသဘောတူညီချက်တွင်ပူးတွဲပါ ၀ င်သောပါ ၀ င်သောအလုပ်ကြေငြာချက် (များ) တွင်ဖော်ပြထားသောအဓိပ္ပာယ်များရှိသည်။
"ဥာဏ်ပညာဖြင့်တီထွင်ဖန်တီးထားသောအရာ“ ကန့်သတ်ချက်မရှိသော ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အလုပ်ထုတ်ကုန်များ၊ အတိုင်ပင်ခံပေးပို့နိုင်သောအရာများ၊ တီထွင်မှုများ၊ နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၊ တွေ့ရှိချက်များ၊ ဒီဇိုင်းများ၊ ဖော်မြူလာများ၊ သိကောင်းစရာများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စီးပွားရေးနည်းလမ်းများ၊ မူပိုင်ခွင့်များ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများ၊ မူပိုင်ခွင့်များ၊ ကွန်ပျူတာဆော့ဝဲများ၊ စိတ်ကူးများ၊ ဖန်တီးမှုများ စာများ၊ သရုပ်ဖော်ပုံများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ သိပ္ပံနည်းကျနှင့်သင်္ချာပုံစံများ၊ ဤပိုင်ဆိုင်မှုများအားလုံးကိုတိုးတက်စေခြင်း၊ hard copy (သို့) အီလက်ထရောနစ်ပုံစံဖြင့်ဖြစ်စေဖော်ပြသောအရာများအားလုံးကိုဖော်ပြခြင်းသို့မဟုတ်သရုပ်ဖော်ခြင်း
"လိုင်စင်ရည်ရွယ်ချက်“ ဤသဘောတူညီချက်တွင်ပူးတွဲပါ ၀ င်သောပါ ၀ င်သောအလုပ်ကြေငြာချက် (များ) တွင်ဖော်ပြထားသောအဓိပ္ပာယ်များရှိသည်။
"န်ဆောင်မှုများ“ ဤသဘောတူညီချက်တွင်ပူးတွဲပါ ၀ င်သောပါ ၀ င်သောအလုပ်ကြေငြာချက် (များ) တွင်ဖော်ပြထားသောအဓိပ္ပာယ်များရှိသည်။
“ အလုပ်ထုတ်ကုန်” ဤသဘောတူညီချက်တွင်ပူးတွဲပါ ၀ င်သောအလုပ်ကြေငြာများ (၀ န်ဆောင်မှုများ) ၏ ၀ န်ဆောင်မှုနယ်ပယ်၌ဖော်ပြထားသောအဓိပ္ပာယ်များရှိသည်။
အလုပ် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဖော်ပြချက်များ။ အတိုင်ပင်ခံသည်အတိုင်ပင်ခံ၏ကျွမ်းကျင်မှုကဏ္withinများအတွင်းအတိုင်ပင်ခံ ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရမည်။ အခါအားလျော်စွာ Client နှင့်အတိုင်ပင်ခံတို့သည်ပုံစံတစ်မျိုးဖြင့်ရေးထားသောအမိန့်တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်ပိုပါ ၀ င်နိုင်သည် ပြကွက်တစ်ခု ၀ န်ဆောင်မှုပေးလိုသောအရာများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များအပါအ ၀ င်သတ်မှတ်ချက်များပါ ၀ င်သောအချက်များပါ ၀ င်သည်။ အခြားအရာများအပါအ ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အတိုင်းအတာ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများပြီးစီးရန်အချိန်ဇယား၊ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အသီးသီး၊ ပါတီများမှဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်ပါတီများ၏အခန်းကဏ္ and နှင့်တာဝန်များကိုသတ်မှတ်ပေးလိမ့်မည်။ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏အလုပ်အမိန့်ကိုလက်ခံခြင်း (စာရေးခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ခြင်း (သို့) အခြားနည်း) ဖြင့်ဤအမိန့်သည်“ ဖြစ်လိမ့်မည်။အလုပ်ဖော်ပြချက်” ။ အလုပ်ကြေငြာစာတမ်းတစ်ခုစီသည်ပါတီများမှဆောင်ရွက်သောအခါမှသာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပြီးဤတွင်ဤနေရာတွင်အပြည့်အဝဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဤသဘောတူညီချက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ သက်ဆိုင်သောအလုပ်၏ဖော်ပြချက်သည်ဤသဘောတူညီချက်နှင့်မကိုက်ညီပါကအလုပ်၏ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်၏စည်းကမ်းချက်များသည်အလုပ်၏ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရဆောင်ရွက်ရမည့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သာသက်ဆိုင်လိမ့်မည်။ အတိုင်ပင်ခံသည် ၀ န်ဆောင်မှုများအားပြီးမြောက်ရန်ရွေးချယ်သောနည်းလမ်းနှင့်အတိုင်ပင်ခံ၏တစ် ဦး တည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုတွင်ရှိသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုများပြီးစီးရန်အတိုင်ပင်ခံသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အသုံးအဆောင်များ၊ ကိရိယာများနှင့်အခြားပစ္စည်းများအား၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အသုံးစရိတ်ဖြင့်ပေးရန်သဘောတူသည်။ သို့သော် Client သည်လိုအပ်သောအခါ၎င်း၏အတိုင်ပင်ခံများနှင့်အသုံးအဆောင်များကိုရရှိနိုင်လိမ့်မည်။
အမိန့်ပြောင်းပါ။ ၀ ယ်သူသည်လက်ရှိထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တစ်ခုအရဆောင်ရွက်သောအတိုင်ပင်ခံအပါအ ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အပြောင်းအလဲများ (သို့) ဖြည့်စွက်မှုများကိုအခါအားလျော်စွာတောင်းခံနိုင်သည်။ မည်သည့်တောင်းဆိုမှုမဆို၊ အတိုင်ပင်ခံ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းသာလက်ခံလျှင်၊ အတိုင်ပင်ခံသည် ၀ န်ဆောင်မှုကြေး၊ ၀ န်ဆောင်မှုအချိန်ဇယားနှင့်ငွေပေးချေမှုများအပါအ ၀ င်နောက်ထပ်အပြောင်းအလဲများအတွက်စာရေး ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်စာပြောင်းရန်အမိန့်အဆိုပြုချက်ကိုပေးပါလိမ့်မည်။ ပါတီများ၏အချိန်ဇယားနှင့်တာဝန်များ မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုအမိန့်အဆိုပြုလွှာကိုပါတီများမှလက်ခံလျှင်“ ပြောင်းလဲမှုအမိန့်” ဟုမှတ် ယူ၍ သက်ဆိုင်သည့်အလုပ်ကြေငြာချက်တွင်ပူးတွဲထည့်သွင်းရမည်။ ပြောင်းလဲခြင်းအမိန့်သည်ပါတီနှစ်ခုလုံး၏လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်တွင်သာအကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းနောက်သက်ဆိုင်သည့်အလုပ်နှင့်ဤသဘောတူညီချက်တွင်ပူးတွဲပါ ၀ င်ပါလိမ့်မည်။ သက်ဆိုင်သောပြောင်းလဲမှုအမိန့်၏မည်သည့်ပြဋ္ဌာန်းချက်သည်ယင်းသို့ထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဤသဘောတူညီချက်မတိုင်မီကဖော်ပြခဲ့သောအလုပ်၏ထုတ်ပြန်ချက်နှင့်မကိုက်ညီလျှင်၊ သက်ဆိုင်သောပြောင်းလဲမှုအမိန့်၏စည်းကမ်းချက်များသည်ပြောင်းလဲခြင်းအောက်တွင်ဆောင်ရွက်ရမည့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ အော်ဒါ။ ၀ န်ဆောင်မှုသည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်လိုအပ်သောအချိန်သည်ပြောင်းလဲမှုအမိန့်တစ်ခု၏ရလဒ်အဖြစ်ထပ်မံတိုးချဲ့ရန်လိုအပ်ပြီးဤသက်တမ်းတိုးသည်အတိုင်ပင်ခံမှမသတ်မှတ်ဘဲမည်သည့်အလုပ်၏ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမဆိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ပြောင်းလဲမှုအမိန့်တစ်ခုတွင်ပါတီများသည် ၀ န်ဆောင်မှုများလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သောအချိန်များကိုထည့်သွင်းရန်အချိန်ဇယားများအပါအ ၀ င်အချိန်ဇယားကိုညှိလိမ့်မည်။
ဖောက်သည်တာဝန်မရ။ အတိုင်ပင်ခံ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် Consultant Deliverables ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့နှင့်စပ်လျဉ်း။ Client သည်အချို့သောအလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်ရမည်၊ အချက်အလက်အချို့ကိုပေးအပ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာအလုပ်၏ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသောအတိုင်းသို့မဟုတ်အတိုင်ပင်ခံမှတောင်းခံသည့်အတိုင်းအချိန်မှီလုပ်ဆောင်ရလိမ့်မည်။ အချိန် (“ ၀ ယ်သူတာဝန်”) ၀ န်ဆောင်မှုသည် Consultant ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် Consultant Deliverables များဖန်တီးမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Client ၏အကြောင်းအရာဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးလိမ့်မည်ဟု ၀ န်ခံသည်။ Client ၏အတိုင်ပင်ခံ၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် Client ၏အချိန်နှင့်ထိရောက်သောဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်ဤသဘောတူညီချက်အောက်ရှိအလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သော Statement တစ်ခုစီအပေါ်မူတည်သည်။ အတိုင်ပင်ခံသည် ၀ န်ဆောင်မှုများအချိန်မီမဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်းကြောင့်ပျက်ကွက်ခြင်း (၀ န်ဆောင်မှုများပေးအပ်ခြင်းအပါအ ၀ င်) ၀ န်ဆောင်မှုများလုပ်ဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်း (သို့) နှောင့်နှေးခြင်းမှခွင့်လွှတ်လိမ့်မည်။ ၀ ယ်သူသည် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတိုင်ပင်ခံပေးပို့သော ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီကြောင်းသေချာစေရန်တာဝန်ရှိသည်။ (ii) ၀ န်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်ရာတွင်သက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စု၊ ပြည်နယ်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီဖောက်သည်များ၏လိုက်နာမှုကိုသေချာစေခြင်း၊ (၃) ၀ န်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်စဉ်ကာလအတွင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုအားလုံးအတွက်အဆက်အသွယ်တစ်ခုတည်းကိုသတ်မှတ်ခြင်း၊ ၂) အလုပ်ပိတ်ရက်များ၊ (v) စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန်နှင့်ကုမ္ပဏီသို့တုံ့ပြန်ချက်ပေးခြင်း၊ အတိုင်ပင်ခံ၏ ၀ န်ဆောင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဆက်စပ်၍ အတိုင်ပင်ခံလိုအပ်သောတတိယပုဂ္ဂိုလ်များထံမှလိုအပ်သောသဘောတူညီချက်များရယူခြင်း ဤသဘောတူညီချက် (သို့) သက်ဆိုင်သောအလုပ်ကြေငြာချက်။
စီမံကိန်းကြေးများနှင့်ပြန်လည်ပေးဆပ်နိုင်သောပစ္စည်းများ။ သက်ဆိုင်သူသည်အလုပ်ကြေငြာများအားလုံးတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်ပင်ခံအခကြေးငွေများနှင့်အခြားလျော်ကြေးများကိုပေးရမည်။ ၀ န်ဆောင်မှုသည် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်စပ်၍ အတိုင်ပင်ခံ၏လုပ်ငန်း၏အဓိကနေရာများနှင့်ဝေးကွာနေစဉ်အတိုင်ပင်ခံမှပေးဆပ်ခြင်း (သို့) ဖြစ်ပေါ်လာသောအခြားကုန်ကျစရိတ်များအားလုံးအတွက်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အားပြန်လည်ပေးဆပ်လိမ့်မည်။ အလုပ်ကြေငြာစာတမ်းတစ်ခုစီတွင်ဖော်ပြထားသည်။ အတိုင်ပင်ခံသည်မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆို ၀ ယ်ယူသူမှပေးချေရမည့်ငွေပမာဏကျန်ရှိနေပြီးယင်းပမာဏကိုပေးဆပ်ရမည့်ရက်ထက်ကျော်လွန်ပါက ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုလုပ်ဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ လိုအပ်သောငွေပေးချေရန်ငွေပေးချေရန်ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများရပ်ဆိုင်းခြင်းသည်အတိုင်ပင်ခံပေးပို့မှုနှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများ၏နောက်ဆုံးရက်များကိုဤဆိုင်းငံ့မှုသို့မဟုတ်ကြန့်ကြာမှုဒဏ်မှအတိုင်းအတာအထိထပ်တိုးစေလိမ့်မည်။
ငွေတောင်းခံလွှာနှင့်ငွေပေးချေမှုမရ။ မည်သည့်သက်ဆိုင်သောအလုပ်ကြေငြာစာတမ်းများတွင်မဆိုဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအတိုင်ပင်ခံအတွက်ပေးဆောင်ရမည့်အခကြေးငွေများနှင့်အခြားလျော်ကြေးများသည်သတ်မှတ်ထားသောအတိုင်းပေးဆောင်ရမည်။ ထို့အပြင် ၀ ယ်သူသည်ငွေတောင်းခံလွှာကိုတင်ပြီးငါးရက်အတွင်း၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အခကြေးငွေများ၊ အခကြေးငွေများ၊ ခရီးစရိတ်၊ တည်းခိုခန်းများနှင့်အခြားမလိုအပ်သောအခကြေးငွေများအားလုံးကိုငွေပြန်အမ်းမည်။ ငွေတောင်းခံလွှာတွင်မူရင်းပြေစာအားလုံးသို့မဟုတ်အလားတူစာရွက်စာတမ်းများမိတ္တူပါလိမ့်မည်။ အတိုင်ပင်ခံသည် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်နွှယ်သောတတိယကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်အခြားသူများကိုအလုပ်ခန့်ရန်လိုအပ်သည်ဟုယူဆလျှင်၎င်းအား Client အားအသိပေးလိမ့်မည်။ Client ၏ခွင့်ပြုချက်အရ Client သည်ဤတတိယအဖွဲ့အစည်း၏ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကိုပေးချေလိမ့်မည်။ ငွေတောင်းခံလွှာမတင်သည့်နေ့မှရက်ပေါင်း (၃၀) ထက်ပိုသောငွေပေးချေရန်ပျက်ကွက်ပါကဖောက်သည်သည်တစ်လလျှင် ၁ ရာခိုင်နှုန်း (သို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) သို့မဟုတ်အများဆုံးတရားဝင်နှုန်းနှင့်ညီသောအတိုးနှုန်းကိုပေးချေလိမ့်မည်။ ဤငွေတောင်းခံလွှာတွင်ပြထားသောပမာဏပေါ်တွင်ခွင့်ပြုသည်။ ဤသဘောတူညီချက်၏ဆောင်ရွက်ချက်များစုဆောင်းခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်သည်မည်သည့်စားသုံးသူမှခိုးနားထောင်မှုအကာအကွယ်ပေးသောဥပဒေအောက်တွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသီးသန့်ဆက်သွယ်ရေးတစ်ခုဟုမယူဆဘဲဖောက်သည်သည်ဤသဘောတူညီချက်၏စည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရန်ပါးစပ်ဆက်သွယ်ရေးမှတ်တမ်းများနှင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်သဘောတူသည်။
အခွန်မရ။ ၀ ယ်သူသည်အတိုင်ပင်ခံမှအတိုင်ပင်ခံသို့ ၀ ယ်သူအားပေးဆပ်ရမည့်မည်သည့်ပမာဏနှင့်မဆိုပြည်ထောင်စု၊ ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဒေသရောင်း ၀ ယ်မှု၊ သုံးစွဲမှု၊ ယစ်မျိုး၊ အထူးအခွင့်အရေးသို့မဟုတ်အခြားအခွန်များနှင့်အကဲဖြတ်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ အတိုင်ပင်ခံ၏အသားတင်ဝင်ငွေ (သို့) အသားတင်တန်ဖိုးပေါ် မူတည်၍ အခွန်များ တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းများ (သို့) အခြားလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကကောက်ခံရမည့်အခွန်များအတွက်အတိုင်ပင်ခံသည်ငွေတောင်းခံလိမ့်မည်။ အတိုင်ပင်ခံသည်လွတ်လပ်သောကန်ထရိုက်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် ၀ ယ်သူသည် ၀ င်ငွေခွန်၊ လူမှုဖူလုံရေး၊ Medicare (သို့) မသန်စွမ်းအဖြစ် ၀ န်ထမ်းအားပေးသောလုပ်အားခနှင့်ဆက်နွယ်ရန်ထိမ်းသိမ်းရန်သို့မဟုတ်ပေးချေရန်မလိုအပ်ပါ။
အလုပ်ထုတ်ကုန်ပိုင်ဆိုင်မှု။ အတိုင်ပင်ခံသည်လက်ရှိတည်ရှိနေသောသို့မဟုတ်အနာဂတ်၌တည်ရှိနိုင်သည့်အတိုင်ပင်ခံမှပေးအပ်သောအလုပ်၊ ထုတ်ကုန်၊ သို့မဟုတ်အတိုင်ပင်ခံ၏ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့် (သို့) မည်သည့်စာရွက်စာတမ်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ အလုပ်ထုတ်ကုန်၊ သိကောင်းစရာများ၊ ဒီဇိုင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကိုမဆိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ အတိုင်ပင်ခံမှဖန်တီးခဲ့သည့်တီထွင်မှု၊ နည်းပညာ၊ ကုန်သွယ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက် (သို့) စိတ်ကူးနှင့်ဆက်စပ်သောအသိဥာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အားလုံးကိုအတိုင်ပင်ခံမှဖန်တီးသည်။ မူပိုင်ခွင့်များ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် (မူပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများကိုကန့်သတ်မထားပါ) အပါအ ၀ င်မူပိုင်ခွင့်အားလုံး၊ Work Product” အပါအ ၀ င် ၀ ယ်သူသည်မည်သည့်အရာမဆိုထုတ်ကုန်အားလုံးသည်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ရမည်ဟုသဘောတူသည်။ ဖောက်သည်သည်အတိုင်ပင်ခံ၏တောင်းဆိုချက်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်အတိုင်းစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အလုပ်တူကုန်ပစ္စည်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအတိုင်ပင်ခံရန်လိုအပ်သောအခြားစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုကွပ်မျက်ရန်သဘောတူသည်။ ဖောက်သည်သည်အတိုင်ပင်ခံ၏တောင်းဆိုချက်၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအချိန်အတွင်းဤစာရွက်စာတမ်းများကိုအကြောင်းပြချက်တစ်စုံတစ်ရာဖြင့်မဆောင်ရွက်သောကိစ္စ၌ဖောက်သည်သည်ဤအရာအား Client ကိုယ်စားရှေ့နေများအဖြစ်အတိုင်ပင်ခံခန့်အပ်သည်။ စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်ဒွန်တွဲနေသည်။ ဖောက်သည်သည်အတိုင်ပင်ခံမှဖန်တီးထားသောမည်သည့်လက်ရာကိုမဆိုအမေရိကန်မူပိုင်ခွင့်ရုံး၊ အမေရိကန်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရုံး (သို့) နိုင်ငံခြားမူပိုင်ခွင့်၊ မူပိုင်ခွင့် (သို့) ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Client သည် Work Product တွင်မည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမျှထိန်းသိမ်းထားပြီး Work Product တွင်ပါ ၀ င်သောအတိုင်ပင်ခံ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမစိန်ခေါ်ရန်သဘောတူသည်။ ဖောက်သည်သည်ဤအတိုင်ပင်ခံ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်သက်ဆိုင်သောအတိုင်ပင်ခံ၏အခွင့်အရေးများကိုကျင့်သုံးရန်အတတ်နိုင်ဆုံးနည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့်အကူအညီပေးရန်သဘောတူသည်၊ ၎င်းစာရွက်စာတမ်းများကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်သက်သေခံများပေါ်ခြင်းအပါအ ၀ င်အခြားမည်သည့်နိုင်ငံမဆို၌လုပ်ဆောင်ရန် (သဘောတူသည်) ) အတိုင်ပင်ခံသည်အလုပ်ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်သောအတိုင်ပင်ခံ၏အခွင့်အရေးများကိုရယူခြင်း၊ ပြီးမြောက်ခြင်း၊ အထောက်အထားပြုခြင်း၊ တည်တံ့ခိုင်မြဲရန်နှင့်လိုက်နာကျင့်သုံးရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာတောင်းခံနိုင်သည်။
ဖောက်သည်၏ဉာဏပစ္စည်းမရ။ ၀ ယ်သူ (သို့မဟုတ်လိုင်စင်ရရှိသူ) သည်ဖောက်သည်မှအစပြု၊ တီထွင်၊ ၀ ယ်ယူသော၊ လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်ချက်များတွင်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်အကျိုးစီးပွားများအားလုံးကိုအမြဲထိန်းသိမ်းထားလိမ့်မည်။ Client များ၊ ၎င်း၏ Affiliates များသို့မဟုတ် Client များကိုယ်စားမည်သည့်အရာမဆိုဖြည့်စွက်မှုများ၊ တိုးတက်မှုများ၊ တိုးတက်မှုများ (သို့) အခြားပြုပြင်မွမ်းမံမှုများနှင့်အတူ၊ ဤသဘောတူညီချက်နှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲတူညီသောနေရာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဤသဘောတူညီချက်အောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်မှု (သို့) မဆောင်ရွက်မီကာလအတွင်း (စုပေါင်း၍“ Client Intellectual Property”) ဤသဘောတူညီချက်တွင်ပါ ၀ င်သောအရာမှန်သမျှ၊ အတိုင်ပင်ခံအားမည်သည့်အခွင့်အရေး၊ ခေါင်းစဉ်၊ လိုင်စင် (သို့) အခြားအကျိုးခံစားခွင့်သို့မဆို (ပြုပြင်လိုလျှင်၊ အကျိုးသက်ရောက်သည်ဖြစ်စေ၊ အခြားနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ) ပြုပြင်ပိုင်ခွင့်နှင့်လိုင်စင်မှအပ၊ ဤနေရာတွင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ဤအရာများကိုသုံးပါ။
ပုဒ်မ ၄.၃ (ခ) အရ၊ အတိုင်ပင်ခံသည်ဖောက်သည်အားအကန့်အသတ်မရှိ၊ အစီရင်ခံစာများ၊ အဆိုပြုလွှာများ၊ စာရင်းများ၊ နည်းပညာများအပါအ ၀ င်အကန့်အသတ်မရှိ၊ အစဉ်အမြဲမလွှဲပြောင်းနိုင်သော၊ မလွှဲပြောင်းနိုင်သော၊ လိုင်စင်ရရည်ရွယ်ချက်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်စပ်၍ အတိုင်ပင်ခံမှ ၀ ယ်ယူသောပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်း၊ နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ ဤအပိုင်း ၄.၃ (က) ၌အတိုင်ပင်ခံ၏ခွင့်ပြုချက်လိုင်စင်သည် Affiliate တစ်ခုသို့သာလွှဲပြောင်းနိုင်ပြီးဤအပိုင်းနှင့်အညီ Client ၏သဘောတူညီချက်၏တာဝန်တစ်ခုနှင့်သာသက်ဆိုင်ကြောင်း ၀ န်ခံသည်။ 16မရ။ သံသယကိုရှောင်ရှားရန်လိုင်စင်သည်လိုင်စင်ပါ ၀ င်သည့်မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းကိုမဆိုသုံးခွင့်၊ ရောင်းခွင့်သို့မဟုတ်လိုင်စင်ခွဲမပါ ၀ င်ပါ၊ လိုင်စင်လွှဲပြောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ လွှဲပြောင်းသည်ဖြစ်စေသုံးနိုင်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုကိုဆောင်ရွက်စဉ်အတိုင်ပင်ခံမှပေးအပ်သောလျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အလုပ်ထုတ်ကုန်ကိုဖောက်သည်က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်စားနှင့်သဘောတူသည်၊ ၀ န်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်စဉ်ကာလအတွင်း ၀ ယ်သူအားလိုင်စင်ရရှိရန်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာအသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုသဘောတူသည်။ အပိုင်း (က) အကန့်အသတ်မရှိ၊ ၀ င်ဆောင်မှုများအပါအ ၀ င်အခြားမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့်မဆို ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းအပါအ ၀ င်ဤသဘောတူညီချက်၏အပိုင်းနှင့်အညီ၊ 16(၂) လိုင်စင်ရရည်ရွယ်ချက်ပြည့်စုံရန်လိုအပ်သောမှအပအခြားမည်သည့်ပြင်ပအစီရင်ခံစာများတွင်မဆိုလျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက် (သို့) ထုတ်ကုန်ထုတ်ကုန်တစ်ခုခုကိုသုံးခြင်း။ ၀ ယ်သူသည်လိုင်စင်ရရှိထားသောရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းမှအပအခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ၎င်းရရှိထားသောအပြည့်အဝပုံစံနှင့်မူပိုင်ခွင့်ကြော်ငြာစာများ၊ မည်သည့်မူပိုင်ခွင့်သတိပေးချက်များမပါဘဲမည်သည့်ပုံစံကိုမှအသုံးမပြုရပါ။
ဤသဘောတူညီချက်တွင်ပါ ၀ င်သူတစ် ဦး ချင်းစီသည်အခြားပါတီ၏လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက် (ဤသဘောတူညီချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း) ကိုခိုင်မာသောယုံကြည်ချက်ရှိရန်နှင့်မည်သည့်တတိယအဖွဲ့အစည်းသို့မျှလျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်များအားထုတ်ဖော်ခြင်းမပြုရန်သဘောတူသည်။ ပါတီတစ်ခုစီသည်အတိုင်ပင်ခံ၏ ၀ န်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် Client တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းမှတပါးအခြားပါတီ၏လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်များကိုမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်မျှမသုံးရန်သဘောတူသည်။
ဤပုဒ်မ ၅ တွင်ဖော်ပြထားသည့်ပါတီအသီးသီး၏တာဝန်ဝတ္တရားများသည်အခြားပါတီ၏အမှားမရှိကြောင်းအထောက်အထားခိုင်လုံစွာဖြင့်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့်လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်၏မည်သည့်အပိုင်းနှင့်မဆိုသက်ဆိုင်သည်။ ; (၂) ယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်အ ၀ မရှိသောအခြားပါတီသို့တရား ၀ င်လွတ်လပ်စွာဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ သို့မဟုတ် (iii) အခြားပါတီတစ်ခုမှအခြားပါတီသို့ဆက်သွယ်သောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမှကိုးကားခြင်းမရှိဘဲသီးခြားတီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်တရားရုံးသည်တရား ၀ င်လိုအပ်သောအမိန့်ကိုတုံ့ပြန်သောအားဖြင့်ပါတီသည်လျှို့ဝှက်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုထုတ်ဖော်နိုင်သည်။ ပါတီမှပြင်ဆင်ထားသောလျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးသည်ထုတ်ဖော်သည့်ပါတီ (သို့) ၎င်း၏ပေးသွင်းသူများ (သို့) ၀ ယ်သူများ၏တစ် ဦး တည်းသောမူပိုင်ဖြစ်သည်။ ပါတီတစ်ခုခုကိုထုတ်ဖော်တောင်းဆိုခြင်းအားဖြင့်လက်ခံသည့်ပါတီသည်ထုတ်ဖော်ပြသထားသောပါတီသို့မူရင်းနှင့်ယင်းလျှို့ဝှက်အချက်အလက်များမိတ္တူများချက်ချင်းပေးအပ်ရန်သဘောတူသည်။ ထုတ်ဖော်သည့်ပါတီ၏ရွေးချယ်မှုတွင်လက်ခံသူသည်ဤပုဒ်မ ၅ ပါအတိုင်း၎င်း၏လိုက်နာမှုကိုစာဖြင့်ထောက်ခံချက်ပေးရမည်။
အပိုင်း ၄.၁ (သို့) ဤပုဒ်မ ၅ တွင်ပါရှိသောမည်သည့်အရာကိုမဆိုပါတီများသည်အတိုင်ပင်ခံမှသဘောတူပြီး ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ဖောက်သည်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည် (သို့) အလားတူလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် ၀ င်ရောက်ပါ ၀ င်သောအတိုင်ပင်ခံ၏ကျွမ်းကျင်မှု၊ အသိပညာ မည်သည့်နည်းနှင့်မျှအလျှော့ ပေး၍ မရသောတိုးတက်ပြောင်းလဲနေသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိရှိခြင်း။ ဖောက်သည်များအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်သဘောတူခြင်း၊ လုပ်ငန်းကြေငြာချက်တွင်ပါ ၀ င်သူများအကြားနောက်ဆက်တွဲသဘောတူညီချက်မပါရှိလျှင်၊ (i) အတိုင်ပင်ခံသည်အကန့်အသတ်မရှိ၊ သဘောတရားများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စိတ်ကူးများနှင့်အလုပ်၏စွမ်းရည်ကိုကန့်သတ်ထားမည်မဟုတ်ပါ။ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်နွှယ်သောဖွံ့ဖြိုးဆဲပရိုဂရမ်များ၊ ယေဘူယျအားဖြင့်စိတ်ကူးများ၊ အယူအဆများ၊ သိကောင်းစရာများ၊ နည်းလမ်းများ၊ နည်းစနစ်များ အတိုင်ပင်ခံသည်၎င်း၏တစ် ဦး တည်းဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းသာလျောက်ပတ်သည်။
ပုဒ်မ ၄.၃ အရဤသဘောတူညီချက်ရပ်စဲခြင်းသို့မဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းတွင်ပါတီတစ်ခုစီ (i) သည်အခြားပါတီ၏အလုပ်ထုတ်ကုန် (သို့) ဤအချက်အလက်များမှပေးအပ်သောလျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်များအသုံးပြုခြင်းကိုချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းလိမ့်မည်။ (၂) ပါတီ၏ကွန်ပျူတာသိုလှောင်မှု (သို့) အခြားပါတီ၏လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်များကိုထိုပါတီ၏ကွန်ပျူတာသိုလှောင်ခန်းသို့အွန်လိုင်းမှမဟုတ်အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက်များအပါအ ၀ င်အခြားမည်သည့်မီဒီယာမှမဆိုဖျက်ပစ်ရမည်။ နှင့် (၃) အခြားပါတီသို့ ပြန်၍ ဖြစ်စေ၊ အခြားပါတီ၏ရွေးချယ်မှုအရဖြစ်စေ၊ ထိုပါတီပိုင်သို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်များ၏မိတ္တူအားလုံးကိုထိုပါတီ၏လက်ဝယ်တွင်ဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။ ပါတီတစ်ခုသည်ဤသဘောတူညီချက်အားရပ်စဲသည့်အခြေအနေတွင်အတိုင်ပင်ခံသည်ရပ်စဲသည့် နေ့မှစ၍ ဆောင်ရွက်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ငွေပေးချေမှုကိုခံစားခွင့်ရှိလိမ့်မည်။
အတိုင်ပင်ခံသည်ကိုယ်စားပြုသည်၊ အာမခံသည်။ (ခ) အတိုင်ပင်ခံသည်အပိုင်း ၄ တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း (Product Consultant) (သို့) အတိုင်ပင်ခံ၏ ၀ န်ထမ်းများ (သို့) ကန်ထရိုက်တာများဖန်တီးထားသောမည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းကိုမဆိုလိုင်စင်ချပိုင်ခွင့်အပါအ ၀ င်)၊ (ဂ) အတိုင်ပင်ခံ၏အမှန်တကယ်ဗဟုသုတအရ Work Product သည်မည်သည့်မူပိုင်ခွင့်၊ မူပိုင်ခွင့်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ လူသိရှင်ကြားသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်၊ သို့မဟုတ်စာချုပ်အရဖြစ်စေ၊ တရား ၀ င်ဖြစ်စေ၊ ဘုံဥပဒေအရဖြစ်စေမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏အခြားမူပိုင်ခွင့်ကိုမျှမချိုးဖောက်ပါ။ အတိုင်ပင်ခံသည်ဖောက်သည်အားပျက်စီးခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်များ၊ တောင်းဆိုချက်များ၊ ကုန်ကျစရိတ်များ (သို့မဟုတ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောရှေ့နေများအခကြေးငွေများအပါအ ၀ င်) အခြားလျော်ကြေးများပေးရန်သဘောတူသည်။ 1.
ဖောက်သည်ကကိုယ်စားပြုသည်၊ အာမခံသည်။ (ခ) ဖောက်သည်လည်းမဟုတ်၊ ဖောက်သည်၏ပိုင်ရှင်များ၊ အရာရှိများ၊ ဒါရိုက်တာများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ၀ န်ထမ်းများနှင့်လက်အောက်ခံများမှလည်းမည်သည့်မူပိုင်ခွင့်၊ မူပိုင်ခွင့်၊ အမှတ်တံဆိပ်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ လူသိရှင်ကြားသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်၊ သို့မဟုတ်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးကိုမဆိုစာချုပ်အရသော်လည်းကောင်းချိုးဖောက်မည်မဟုတ်ပါ။ ဥပဒေ၊ ဥပဒေသို့မဟုတ်ဘုံဥပဒေ။ ဖောက်သည်သည်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အားပျက်စီးခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်များ၊ တောင်းဆိုချက်များ၊ ကုန်ကျစရိတ်များ (သို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောရှေ့နေများအခကြေးငွေများအပါအ ၀ င်) အခြားကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုပေးရန်သဘောတူသည်။ 2.
အပိုင်း ၆.၁ တွင် SET FOR နည်းကို ကျော်လွန်၍ အတိုင်ပင်ခံသည် ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ ယ်သူ၊ ၀ င်ရောက်သူ၊ ၀ ယ်သူတည်နေရာ၊ အခြားနေရာတွင်မသုံးပါ။ ကဏ္ARTတစ်ခုအတွက်ရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်ပြည့်စုံမှု။ အခြားအာမခံများအားလုံးကိုဤတွင်ငြင်းဆိုသည်။ ထို့ထက်ပိုများသောအပိုင်း ၆.၁ တွင်ပါ ၀ င်သည်ထက် ကျော်လွန်၍ အတိုင်ပင်ခံသည်မပြုလုပ်နိုင်ပါ၊ ငြင်းပယ်ခြင်းများကိုလည်းအာမခံချက်ပေးနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခု၊ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူညီသောအခြေအနေများတွင်၊ အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်သဘောတူညီမှုများ၊ စိတ်ကျေနပ်မှုရှိခြင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုများအလိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသူ၏လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအထွေထွေ။
၇.၁ အတိုင်ပင်ခံသည်လွတ်လပ်သောကန်ထရိုက်ဖြစ်ပြီး Client ၏ ၀ န်ထမ်းမဟုတ်ပါ။ ဤသဘောတူညီချက်တွင်မည်သည့်အရာကိုမဆိုလက်တွဲလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အေဂျင်စီ၊ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်ဆက်ဆံရေးကိုဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်သည်ဟုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသင့်သည်။ အတိုင်ပင်ခံသည်အတိုင်ပင်ခံ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပြီးမြောက်ရန်ရွေးချယ်သောနည်းလမ်းနှင့်နည်းလမ်းသည်အတိုင်ပင်ခံ၏တစ် ဦး တည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုတွင်ရှိသည်။ အတိုင်ပင်ခံသည်ဖောက်သည်ကိုယ်စားမည်သည့်ကိုယ်စားပြုမှု၊ စာချုပ်၊ ကတိကဝတ်ပြုရန်သို့မဟုတ်ဖောက်သည်၏အမည်အတွက်သို့မဟုတ်မည်သည့်မည်သည့်တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်ဝတ္တရားများကိုမဆိုလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏တာဝန်ဝတ္တရားများတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဆောင်ရွက်ရန်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုကုမ္ပဏီ၏တစ်ခုတည်းသောထိန်းချုပ်မှုနှင့်လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်ရှိသည်။ ၀ ယ်သူသည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်များအားရွေးချယ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဦး တည်ခြင်းသို့မဟုတ်လျော်ကြေးပေးခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း။ လုပ်ပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိစေရ။
၇.၂ အတိုင်ပင်ခံနှင့် ၀ ယ်သူသည်အခွန်ဥပဒေ (ဒေသ၊ ပြည်နယ်နှင့်ဖယ်ဒရယ်) အားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်၍ လွတ်လပ်သောကန်ထရိုက်တာအဖြစ်သဘောထားမည်ဟုသဘောတူသည်။ အတိုင်ပင်ခံသည်ဒေသခံ၊ ပြည်နယ်နှင့်/သို့မဟုတ်ပြည်ထောင်စု ၀ င်ငွေ၊ လူမှုဖူလုံရေးနှင့်အတိုင်ပင်ခံများအတွက်အလုပ်လက်မဲ့အခွန်များပေးရန်တစ်ခုတည်းသောတာဝန်ရှိသည်။ ၀ ယ်သူသည်မည်သည့်အခွန်မှမယူပါ၊ ကုမ္ပဏီအတွက် W-7.2 ပုံစံများကိုပြင်ဆင်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းဥပဒေအရလိုအပ်ပါကအတိုင်ပင်ခံတစ် ဦး ကိုပုံစံ ၁၀၉၉ ပေးပါလိမ့်မည်။ အတိုင်ပင်ခံ၏လျော်ကြေးငွေ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်မည်သည့်လူမှုဖူလုံရေး၊ ဖက်ဒရယ်၊ ပြည်နယ် (သို့) အခြား ၀ န်ထမ်းလစာလစာအခွန်များအတွက် ၀ ယ်သူအားချုပ်နှောင်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။
ဤသဘောတူညီချက်၏သက်တမ်းသည်စတင်အာဏာသက်ရောက်သည့်နေ့မှ စ၍ (i) စတင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရက်စွဲ၏ပထမနှစ်ပတ် (သို့) (၂) သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်း (သို့) မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်မဆိုထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း၏အစောဆုံးရပ်စဲခြင်း ထိုမှတပါးထင်ထင်ရှားရှားရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
မူရင်းနှင့်ရပ်စဲခြင်း အောက်ပါဖြစ်ရပ်များ (သို့မဟုတ်) ပျက်ကွက်သောပါတီသည်အခြားပါတီ (သို့မဟုတ်) ပျက်ကွက်ပါကအောက်ပါသဘောတူညီချက် (သို့မဟုတ်) ပျက်ကွက်ပါက (i) ပျက်ကွက်သောပါတီသည်ပစ္စည်းချိုးဖောက်ခြင်းကိုကျူးလွန်သည်။ ပုဒ်မ ၈.၃ တွင်ဖော်ပြထားသည့်အချိန်ကာလအတွင်းဤချိုးဖောက်မှုကိုကုစားရန်ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိလျှင်၎င်း၊ သို့မဟုတ် (၂) ငွေရေးကြေးရေးပျက်ကွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက်အသနားခံစာတင်ခြင်း၊ ပျက်ကွက်သည့်ပါတီအတွက်လက်ခံသူခန့်အပ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်ပျက်ကွက်သောပါတီ၏မြီရှင်များအကျိုးအတွက်မည်သည့်တာဝန်ကိုမဆိုပေးအပ်ခြင်း။
ကုထုံးနှင့်ကုထုံးများမရ။ မည်သည့်ပါတီမဆိုယင်း၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက Defaulting Party သည် Defaulting Party သို့စာရေးအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ ပါတီ၏အဆုံးသတ်ပိုင်ခွင့်။ ) Defaulting Party သည်ထိုချိုးဖောက်မှုကိုကုစားရန်ဤအကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် (သို့) သုံးဆယ် (၃၀) တွင်ကျိုးကြောင်းသင့်လျော်စွာမကုသနိုင်လျှင်၊ ရက် (၃၀) (သို့မဟုတ်) ဆယ်ရက် (၁၀) ရက်ရလိမ့်မည်။ Defaulting Party သည် Defaulting Party အား Defaulting Party သို့ဤသုံးဆယ်ရက် (၃၀) အတွင်းကာလအတွင်းပျောက်ကင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါကကျိုးကြောင်းဆီလျော်ရန်လိုအပ်လာနိုင်ပါသည်။ ဤအစီအစဉ်ကိုပြီးစီးရန်တရားစွဲဆိုရန် အကယ်၍ ဤဖောက်ဖျက်မှုသည်ဤကုသပျောက်ကင်းပြီးကာလ၌ဆက်လက်မတည်ရှိပါက Non-Defaulting Party သည်ပုဒ်မ ၈.၂ အရဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထပ်မံအသိပေးခြင်းဖြင့်ချက်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါအချက်များတွင်ဖောက်သည်သည်ဤသဘောတူညီချက်အောက်ရှိငွေ (၁၀) ရက်အတွင်းငွေပေးချေရန်ပျက်ကွက်သည့်အခြေအနေတွင်အတိုင်ပင်ခံသည်အတိုးနှုန်းအားအထက်ပါအတိုင်းစာဖြင့်သတိပေးခြင်းအားရပ်ဆိုင်းရန်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ၀ န်ဆောင်မှုအတိုင်ပင်ခံသည်ငွေပေးချေမှုကိုအပြည့်အ ၀ မရရှိမှီအချိန်ထိဤ ၀ န်ဆောင်မှု၏စွမ်းဆောင်ရည် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဆိုင်းငံ့ရန်အတိုင်ပင်ခံ၏ရွေးချယ်မှုသည်ဤအပိုင်း ၈ အရဤသဘောတူညီချက်ကိုရပ်စဲပြီးအတိုင်ပင်ခံ၏အခွင့်အရေးကိုမထိခိုက်စေရ။
အတိုင်ပင်ခံသည်ဤအပိုင်း ၈ အရဤသဘောတူညီချက်ကိုရပ်စဲပြီးပါကအတိုင်ပင်ခံသည် ၀ န်ဆောင်မှုတိုးတက်မှုများအပါအ ၀ င်ရပ်စဲသည့် နေ့မှစ၍ ၀ န်ဆောင်မှုများအားလုံးအတွက်ငွေပေးချေမှုကိုခံစားခွင့်ရှိလိမ့်မည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာမဖယ်ရှားနိုင်သည့်အတိုင်းအတာ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်မှုနှင့်ကုမ္ပဏီမှအမှန်တကယ်ထိခိုက်နစ်နာစေသောအခြားပျက်စီးစေသောအခြားစာချုပ်များကိုဖျက်သိမ်းခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း။ အတိုင်ပင်ခံသည်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ဤအပိုင်း ၈ အရ ၀ ယ်သူသည်ဤသဘောတူညီချက်ကိုရပ်စဲပြီးသည့်အခါအတိုင်ပင်ခံသည်ရပ်စဲသည့်နေ့မှတဆင့်အတိုင်ပင်ခံမှပေးဆပ်ရမည့်အခြားကုန်ကျစရိတ်များအပါအ ၀ င်အတိုင်ပင်ခံသည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်အတိုင်ပင်ခံသည်ရပ်စဲသည့်နေ့မှတဆင့်ရရှိခဲ့သော၎င်း၏အမှန်တကယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ ငွေပေးချေမှုအပြီးတွင်သုံးစွဲသူသည်အပိုင်း ၄.၃ သို့အီလက်ထရောနစ်သို့မဟုတ်အခြားပုံစံများဖြင့်ရပ်စဲသည့်နေ့မှတဆင့်ဤသဘောတူညီချက်နှင့်အညီ ၀ ယ်သူအားအကျိုးကျေးဇူးအတွက်ပေးအပ်ထားသောအတိုင်ပင်ခံမှပေးအပ်သောအရာအားလုံးကိုထိန်းသိမ်းထားခွင့်ရှိလိမ့်မည်။ ပုဒ်မ ၄.၃ အရခွင့်ပြုထားသောလိုင်စင်နှင့်မဆိုင်ဘဲအတိုင်ပင်ခံ၏လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်
တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ဤနေရာတွင် ၀ ယ်သူနှင့် ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုသူမည်သူမဆို ATTORNEY-AT-LAW သို့ ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုပါ။ ပြည်နယ်၏ပြည်နယ်သို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ရေးနှင့်အခြားအာဏာပိုင်များနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသူများနှင့်ရောနှောလျက်ရှိနေပါသည်။ HEREON, PLUS စိတ် ၀ င်စားမှု၊ ဤနေရာတွင်စုဆောင်းခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်းများအားလုံး၊ ၀ တ်ပြုခြင်းနှင့်စွန့်လွှတ်ခြင်းတရားစီရင်ချက်များအားလုံးတွင်အမှားအယွင်းများအားလုံးကိုလွှတ်ပါ။ ဖောက်သည်များသဘောတူညီချက်နှင့်အတည်ပြုချက်များအရတရားသူကြီးကတရားသူကြီး၏အမှုသည်တစ် ဦး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ အခြားသူနှင့်အခြားသူတစ် ဦး လည်းဖြစ်သည်။ ဤသဘောတူညီချက်၏လုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်းအခကြေးငွေပေးချေရမည့် ATTORNEYS ၏ဥပဒေအရအခကြေးငွေသို့မဟုတ်ဤခွင့်ပြုချက်ကိုခွင့်ပြုသည်။
ကဏ္3၃-၆၊ ၈ နှင့် ၉-၁၉ တို့တွင်ပါ ၀ င်သောအခွင့်အရေးများနှင့်တာဝန်များသည်ဤသဘောတူညီချက်၏မည်သည့်ရပ်စဲမှုသို့မဟုတ်သက်တမ်းမဆိုဆက်လက်ရှင်သန်လိမ့်မည်။ ဤသဘောတူညီချက် (သို့) နောက်ဆက်တွဲရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်တွင်ဖော်ပြခြင်းမရှိလျှင်အပိုင်း ၅ တွင်ပါ ၀ င်သောလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်အသိပေးချက်များပါ ၀ င်မှုသည်ပါတီများနှင့်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဆက်ခံသူများနှင့်ခွင့်ပြုထားသောတာဝန်များအားအစဉ်အမြဲသက်ရောက်လိမ့်မည်။
အတိုင်ပင်ခံသည်ဖောက်သည်နှင့်၎င်း၏အရာရှိများ၊ ဒါရိုက်တာများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပိုင်ရှင်များနှင့် ၀ န်ထမ်းများအားမည်သည့်အရာနှင့်မဆိုတာဝန်ယူမှု၊ တောင်းဆိုချက်များ၊ တောင်းဆိုမှုများ၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ၊ ရှေ့နေများအပါအ ၀ င်မည်သည့်အရာနှင့်မဆိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုလိမ့်မည်။ (က) အတိုင်ပင်ခံ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် ဆက်စပ်၍ ဖြစ်ပေါ်သောအခကြေးငွေများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များ (ဂ) ကုမ္ပဏီ၏ပေါ့ဆမှုသို့မဟုတ်မှားယွင်းသောအပြုအမူ၊ ()) အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် (သို့) ၎င်း၏ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ဦး (သို့) အခြားပုဂ္ဂိုလ်များ (ပုဂ္ဂလိကပါတီများ၊ အစိုးရအဖွဲ့များနှင့်တရားရုံးများအပါအ ၀ င်) အပါအ ၀ င်မည်သည့်တောင်းဆိုမှုများ၊ တာဝန်ယူမှု၊ မည်သည့်တောင်းဆိုမှုများကိုမဆို) လျော်ကြေးငွေ၊ လုပ်ခနှင့်နာရီဥပဒေများ၊ အလုပ်အကိုင်ခွန်များနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏လွတ်လပ်သောကန်ထရိုက်တာတစ် ဦး (သို့) ၎င်း၏ ၀ န်ထမ်းများ၏အခြေအနေ (သို့) ဤသဘောတူညီချက်အားချိုးဖောက်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ခိုင်မာတယ်။ ပုဒ်မ ၁၀ အရလျော်ကြေးသည်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ရှေ့နေခများအပါအ ၀ င်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအားလုံးအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အထက်ပါအချက်များအားသော်လည်းကောင်း၊ အထက်ပါအချက်များသည်ဖောက်သည်၏ပေါ့ဆမှုသို့မဟုတ်ဆန္ဒအလွဲသုံးစားပြုမှုကြောင့်ဖြစ်သည့်အတိုင်းအတာအထိမည်သည့်တာဝန်ယူမှု၊ တောင်းဆိုချက်များ၊ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ၊ လုပ်ဆောင်ချက်၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အသုံးစရိတ်များနှင့်သက်ဆိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၀ ယ်သူသည်လျော်ကြေးတောင်းခံခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ကင်းသောကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်၎င်း၏အရာရှိများ၊ ဒါရိုက်တာများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပိုင်ရှင်များနှင့် ၀ န်ထမ်းများအနေနှင့်တာဝန်ယူမှု၊ တောင်းဆိုချက်များ၊ တောင်းဆိုမှုများ၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ၊ ရှေ့နေများအပါအ ၀ င်လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံး၊ ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုဆန့်ကျင်သည်။ (a) Client's business ၏လည်ပတ်မှုနှင့် ဆက်စပ်၍ ဖြစ်ပေါ်သောအခကြေးငွေများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များ (ဂ) ဖောက်သည်၏ပေါ့ဆမှုသို့မဟုတ်မှားယွင်းစွာပြုမူခြင်း၊ ()) ဖောက်သည်၏ဤသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ခြင်း အထက်ပါအချက်များအားမည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ အထက်ဖော်ပြပါတာဝန်ဝတ္တရားများ၊ တောင်းဆိုချက်များ၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များ၏အကြောင်းရင်းများ၊ ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အသုံးစရိတ်များသည်ပေါ့ဆမှုအားနည်းခြင်းသို့မဟုတ်ခိုင်မာသောဆန္ဒရှိမှုကြောင့်အတိုင်းအတာအထိသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိစေရ။
ဤပုဒ်မ ၉ အရလျော်ကြေးတောင်းခံသောပါတီသည်လျော်ကြေးတောင်းခံမှုသို့မဟုတ်စွပ်စွဲချက်အားလျော်ကြေးပေးသည့်ပါတီအားချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည်၊ လျော်ကြေးပေးရန်လျော်ကြေးငွေကိုပါတီအားလျော်ကြေးငွေနှင့်လျော်ကြေးပေးရမည်။ လျော်ကြေးပေးသောပါတီသည်တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်လျော်ကြေးပေးရန်လိုအပ်သည့်မည်သည့်စွပ်စွဲချက်သို့မဟုတ်တောင်းဆိုမှုကိုမဆိုထိန်းချုပ်ရန်အခွင့်အာဏာရှိသည်၊ လျော်ကြေးပေးသောပါတီသည် (i) လျော်ကြေးမပေးသောလျော်ကြေးငွေကိုသဘောတူသည်မဟုတ်၊ လျော်ကြေးမပေးသောပါတီ၏ကြိုတင်ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်မပါဘဲပြုလုပ်ထားသောပါတီအပေါ်အပြစ်ရှိသည်။ အထက်ဖော်ပြပါအချက်များသည်မည်သည့်ဥပဒေကိုမဆိုချိုးဖောက်ကြောင်းတွေ့ရှိခြင်းသို့မဟုတ် ၀ င်ရောက်ခွင့်တောင်းခံခြင်းကိုအစိုးရအာဏာပိုင်တစ် ဦး ဦး ကတောင်းခံလာပါကထိုလျော်ကြေးကို ၀ င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အပေးအယူလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိစေရမည်။
တာဝန်ဝတ္တရား၏ကန့်သတ်; ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုစွန့်လွှတ်ခြင်း။ ဤသဘောတူညီချက်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်နွှယ်သောဖြစ်ပေါ်နေသောအတိုင်ပင်ခံ၏တာဝန်ယူမှုသည် ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်အတိုင်ပင်ခံထံသို့ပေးအပ်သောယခင်ဆယ့် (၁၂) လအတွက်စုစုပေါင်း ၀ န်ဆောင်မှုမှအတိုင်ပင်ခံသို့ပေးသောစုစုပေါင်းအခကြေးငွေထက်မပိုစေရ။ ထိုကဲ့သို့သောတာဝန်ယူမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ (သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်မဆိုင်သောမည်သည့်တာဝန်ယူမှုကိစ္စတွင်မဆို၊ ယခင်ဆယ့်နှစ် (၁၂) လ) တွင်သက်ဆိုင်သောအလုပ်၏သက်ဆိုင်သောထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အောက်၌၊ တာဝန်ယူမှုသည်စာချုပ်၊ အာမခံချက်၊ တင်းကျပ်သောတာဝန်ယူမှုသို့မဟုတ်နှိပ်စက်ခြင်း (သို့) အခြားလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအပေါ်အခြေခံသည်။ ဤအတိုင်ပင်ခံသည်ဖောက်သည်ဖြစ်စေ၊ လက်အောက်ခံဖြစ်စေ၊ ၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများ၊ အရာရှိများ၊ ၀ န်ထမ်းများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များအတွက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေ၊ မတော်တဆဖြစ်စေ၊ ဖြစ်ပေါ်လာသောအကျိုးဆက်ဖြစ်စေ၊ စံနမူနာဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဤသဘောတူညီချက်နှင့်ဆက်စပ်သောမှ လွဲ၍၊ အတိုင်ပင်ခံသည်ဤပျက်စီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုအကြံပေးခဲ့လျှင်ပင် (အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောပါတီများမှမဟုတ်) တတိယပါတီသို့ပေးဆပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းအတာအထိ
ဤသဘောတူညီချက်၏သက်တမ်းအတွင်း (၁) နှစ်ကြာပြီးနောက် (“ ကန့်သတ်ကာလ”) သည်ဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏ Affiliates များအား (က) တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေ၊ အခြားနည်းဖြင့်ဖြစ်စေအကြံဥာဏ်ပေးရန်မကြိုးစားစေပါ။ အတိုင်ပင်ခံ (သို့) ၎င်း၏လက်အောက်ခံများကအလုပ်ခန့်ထားသော (၆) လအတွင်းမည်သည့်အချိန်မဆို၊ အကြံပေးသို့မဟုတ်၎င်း၏လက်အောက်ခံများအားအလုပ်ခန့်ရန်သို့မဟုတ်အလုပ်လက်ခံရန်၊ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏သဘောတူညီချက် မှလွဲ၍ အခြားအလုပ်ရှင်သို့မဟုတ်လွတ်လပ်သောကန်ထရိုက်အဖြစ် (သို့မဟုတ်) အလုပ်ရှင်အားကမ်းလှမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းခြင်း။ ပုဒ်မ ၁၁.၁ သည် ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ဖောက်သည်တစ် ဦး ၏ပါတီ ၀ င်ဖြစ်လာသော ၀ န်ထမ်းဖြစ်လာခြင်းနှင့်၎င်းအား ၀ န်ထမ်းများ၏ချဉ်းကပ်မှု (သို့) ပစ်မှတ်ထားခြင်း၏ရလဒ်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ၀ န်ထမ်းများ၏ချဉ်းကပ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ယင်း၏ Affiliate
ဖောက်သည်သည်ကန့်သတ်ကာလအတွင်းအတိုင်ပင်ခံ၏မည်သည့် ၀ န်ထမ်းကိုမဆိုအလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းလိုလျှင်၊ ဖောက်သည်သည်အတိုင်ပင်ခံသို့စာရေးခြင်းနှင့်ဤအတိုင်ပင်ခံအားပထမနှစ်လျော်ကြေးအထုပ်၏ ၃၀% ထက်မပိုသောလျော်ကြေးပေးရန်ကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။ မည်သည့် ၀ န်ထမ်းအတွက်မဆိုအပိုဆု။ ထို့နောက်အတိုင်ပင်ခံသည်ဤကမ်းလှမ်းချက်များကိုလက်ခံရန်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ရန် ၀ ယ်သူအားတုံ့ပြန်ရန်ရက်ပေါင်း (၃၀) ကြာသည်။ ရက်ပေါင်း (၃၀) အတွင်းအတိုင်ပင်ခံသည်ဖောက်သည်အားမတုံ့ပြန်လျှင်၊ အတိုင်ပင်ခံသည်ဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုငြင်းပယ်သည်ဟုမှတ်ယူလိမ့်မည်။
ဆက်ခံသူများနှင့်တာဝန်များ ဤနေရာတွင်ခွင့်ပြုသည်ထက်အခြားသူသည်ဤသဘောတူညီချက်သို့မဟုတ်အတိုင်ပင်ခံ၏ကြိုတင်သဘောတူညီချက်မပါဘဲဤသဘောတူညီချက် (သို့) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားလုံးကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (သို့) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားလွှဲအပ်ခြင်းမပြုရ။ (မည်သည့်သဘောတူညီချက်ကိုမျှကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာတားမြစ်ထားခြင်းမရှိစေရ) ။ မည်သည့်တာဝန်သို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်ကိုမဆိုလက်ခံရန်အခြေအနေတစ်ခုအနေနှင့်အတိုင်ပင်ခံသည်ဤသဘောတူညီချက်အားလက်မှတ်ထိုးစာမျက်နှာတစ်ခုအားထုတ်ဖော်ရန်နှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအလားအလာရှိသူနှင့်၎င်းနှင့်မည်သည့်လက်အောက်ခံမဆိုလိုအပ်နိုင်သည်။ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအပါအ ၀ င်တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရထားသောဖောက်သည်၏တရားဝင်ခန့်အပ်သူသည်ဤသဘောတူညီချက်၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီဤသဘောတူညီချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ဖောက်သည်များ၏အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များအားလုံးရှိရမည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုအတိုင်ပင်ခံ၏သဘောတူညီချက်သည်ဖောက်သည်အားဤသဘောတူညီချက် (သို့) ၀ ယ်သူအားပေးအပ်ထားသောအလုပ်၏အခြားထုတ်ပြန်ချက်များ (သို့) အခြားမည်သည့်ထုတ်ပြန်ကြေငြာမှုမဆိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူလိမ့်မည်။ ဤပုဒ်မ ၁၂ ကိုဖောက်ဖျက်ရန်ကြိုးစားသည့်မည်သည့်တာဝန်ကိုမျှအချည်းနှီးမဖြစ်စေရ၊ အင်အားသို့မဟုတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိစေရ။ အတိုင်ပင်ခံသည်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ၀ ယ်ယူခြင်း၊ ကုမ္ပဏီပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း (သို့) ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံး (သို့) ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုရောင်းချခြင်းတို့နှင့် ဆက်စပ်၍ ဤသဘောတူညီချက်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ အထက်ပါအချက်များနှင့်အညီ၊ ဤသဘောတူညီချက်သည်ပါတီတစ်ခုချင်းစီနှင့်မသက်ဆိုင်သောဆက်ခံသူများနှင့်ခွင့်ပြုထားသောတာဝန်များအပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်။
ဤနေရာတွင်သတိပေးချက်များနှင့်အခြားဆက်သွယ်ရေးအားလုံးကိုစာဖြင့်ရေးရမည်၊ ၎င်းကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပို့ဆောင်သည့်အခါထိုက်ထိုက်တန်တန်ပေးအပ်ခံရသည်ဟုမှတ်ယူရမည်၊ သို့မဟုတ်အမေရိကန်မှအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရစာဖြင့်ပေးပို့လျှင်ပြန်လည်တောင်းခံငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်း၊ စာပို့ခငွေကြိုဖြည့်ခြင်းကို USA မှပေးအပ်ခြင်းဖြင့်လက်ခံရရှိသည်။ စာတိုက် ၀ န်ဆောင်မှု၊ သို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်စာတိုက်မှသို့မဟုတ်ညတွင်းချင်းလက်ခံလျှင်စာပို့ဝန်ဆောင်မှုများကိုဒေသစံတော်ချိန်ညနေ ၅း၀၀ နာရီမတိုင်မီသို့မဟုတ်ဒေသစံတော်ချိန်ညနေ ၅း၀၀ မတိုင်မီလက်ခံရရှိပါကအောက်ပါနေ့ရက်များတွင်လက်ခံရရှိသည်ဟုမှတ်ယူရမည်။ (သို့) စီးပွားရေးမဟုတ်သောနေ့တွင်သက်ဆိုင်ရာပါတီများကိုအောက်ပါအတိုင်းဤလိပ်စာသို့ဆက်သွယ်ပါ။
ခိုင်မာရန်၊ အပေါင်ပစ္စည်းအခြေခံ၊ LLC
Attn: သောမတ်စ် Howard
Client သို့ Client Name: _______________
အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ။ ဤသဘောတူညီချက်သည်၎င်း၏ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များရွေးချယ်မှု မှလွဲ၍ Illinois ၏ဥပဒေများနှင့်အညီစီမံခန့်ခွဲရမည်။ ပါတီများသည်ဤသဘောတူညီချက်မှဖြစ်ပေါ်လာသောအငြင်းပွားမှု (သို့) ဤသဘောတူညီချက် (သို့) ဤသဘောတူညီချက်နှင့်သက်ဆိုင်သောမည်သည့်အငြင်းပွားမှုမဆို (သို့) ဤသဘောတူညီချက်နှင့်သက်ဆိုင်သောမည်သည့်အငြင်းပွားမှုနှင့်မဆိုအငြင်းပွားမှုအားလုံးကိုလက်လွတ်မခံဘဲတင်ပြသည်။ ဤအငြင်းပွားမှု (သို့) တရားစွဲဆိုခြင်း၊ တရားစွဲဆိုခြင်း (သို့) တရားစွဲဆိုခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း။ ဤတရားရုံးများတွင်ကြားနာဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ဤဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသောအပြည့်အ ၀ အတိုင်းအတာအထိပါတီများသည်ဤသို့မဟုတ်ယခုတရားရုံးသို့ခေါ်ဆောင်လာသောမည်သည့်အငြင်းပွားမှုမဆိုနေရာတစ်ခုထားရှိရန်သို့မဟုတ်ယင်းသို့ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်အဆင်မပြေသောဖိုရမ်တစ်ခုခုခုခုခုကို ခုတုံးလုပ်၍ မလွှဲမရှောင်သာစွန့်လွှတ်လိမ့်မည်။ ငြင်းခုံ။ ပါတီတစ်ခုစီသည်ဤအငြင်းပွားမှုတစ်ခုခုအတွက်စီရင်ချက်အားတရားမကြောင်းအရဖြစ်စေ၊ တည်ဆဲဥပဒေအရပေးအပ်သောအခြားနည်းဖြင့်ဖြစ်စေဆုံးဖြတ်နိုင်သည်ဟုသဘောတူသည်။ ဤစာချုပ်အရပုဒ်မ ၁၃ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီမည်သည့်ပါတီမဆိုမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကမဆို ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းကိုဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူသည်။
အခြားအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းနည်း အပိုင်း ၄.၃ (ခ) တွင်လိုင်စင်ပေးအပ်ထားသောလိုင်စင်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း (သို့) ၀ ယ်သူမှငွေပေးချေခြင်းသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားပြုခြင်း မှလွဲ၍ ဤစာချုပ်ပါ ၀ င်သူများအကြားအငြင်းပွားမှုပေါ်ပေါက်လာပါက၊ ညှိနှိုင်းမှုမအောင်မြင်ပါကပါတီများသည်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးကိုစိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် ၀ င်ပါရန်သဘောတူသည်။ ပါတီများသည်ဖျန်ဖြေမှုကုန်ကျစရိတ်တွင်ညီတူညီမျှခွဲဝေရန်သဘောတူသည်။ ပါတီများမှသဘောမတူပါက ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုပါက၊ ပါတီများမှနှစ် ဦး နှစ်ဖက် ရွေးချယ်၍ သဘောတူနိုင်သောဖျန်ဖြေသူသို့မဟုတ်ခုံသမာဓိဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
တရားစီရင်မှု၏လက်လွတ်မရ။ ဤသဘောတူညီချက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏သဘောတူညီမှုနှင့်သဘောတူညီချက်ရှိပါကမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုပါဝင်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဆက်စပ်လျှက်ရှိသည်။ သို့မဟုတ်ဤသဘောတူညီချက်မှဆက်စပ်မှုမရှိ၊ သို့မဟုတ်ဤသဘောတူညီချက်မှပါဝင်သောအပြောင်းအလဲများ (သို့) အလိုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း တစ် ဦး ချင်းစီ၏လက်မှတ်နှင့်လက်ခံရရှိသောအချက်များမှာ (ကျွန်ုပ်) မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်၊ ကိုယ်စားလှယ်သို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်မှမရှိသောအခြားမည်သည့်ပါတီမဆိုကိုယ်စားပြုခွင့်ရှိသည်၊ ဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေ၊ အခြားမည်သည့်အရာဖြစ်စေ၊ ထိုအရာကိုအလိုရှိသည်၊ အလိုရှိသည်၊ အလိုရှိသည်။ တစ် ဦး ချင်းနားလည်မှု ရှိ၍ ဤအရာကိုစွန့်လွှတ်သူ (၃) တစ် ဦး ချင်းစီသည်ဤအခွင့်အာဏာကိုစွန့်လွှတ်သည်၊ (၄) တစ် ဦး ချင်းစီသည်ထိုသဘောတူညီချက်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်သည်။
ဖြစ်နိုင်ပါကဤသဘောတူညီချက်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုစီနှင့်အလုပ်ကြေငြာချက်တစ်ခုကိုတည်ဆဲဥပဒေအရထိရောက်။ ခိုင်လုံသောနည်းလမ်းအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရမည်၊ သို့သော်ဤသဘောတူညီချက်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များသို့မဟုတ်အလုပ်ကြေငြာချက်တစ်ခုခုကိုတားမြစ်သည်ဖြစ်စေ၊ မမှန်သည်ဖြစ်စေ တည်ဆဲဥပဒေအရဤပြဌာန်းချက်သည်ဤတားမြစ်ချက်သို့မဟုတ်မပြည့်စုံမှု၏အတိုင်းအတာအထိသာအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်၊ ဤပြဌာန်းချက်၏ကျန်ရှိသောအကျုံးမ ၀ င်ဘဲ၊ ဤသဘောတူညီချက်သို့မဟုတ်အလုပ်ကြေငြာချက်၏ကျန်ရှိနေသေးသောကိစ္စများသည်ကိစ္စဖြစ်နိုင်သည်။
ပြင်ဆင်ချက်; စွန့်လွှတ်ခြင်း။ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ရပ်စဲခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ စွန့်လွှတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဤသဘောတူညီချက် (သို့) ပူးတွဲပါ ၀ င်မှုများ၊ ပါတီများအကြားအခြားသဘောတူညီချက်များ (အလုပ်တွဲများ၊ ပြပွဲများ (သို့) ကြေညာချက်) (သို့) ၎င်း၏ပြဌာန်းချက်များအပါအ ၀ င် စာများရေးသားခြင်းနှင့်ပါတီများမှ (သို့မဟုတ်စွန့်လွှတ်မှုတစ်ခုတွင်စွန့်လွှတ်သည့်ပါတီ) မှရေးသားခြင်းမရှိလျှင်မည်သည့်ကြိုးစားမှုသည်မျှစည်းနှောင်မှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ မည်သည့်ပဋိညာဉ်၊ သဘောတူညီချက်၊ ဝတ္တရား၊ အခြေအနေ၊ ကိုယ်စားပြုမှုသို့မဟုတ်အာမခံချက်ကိုမဆိုဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်ပါတီတစ်ခုမှစွန့်လွှတ်ခြင်းသည်အခြားသဘောတူညီချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ ဝတ္တရား၊ အခြေအနေ၊ ကိုယ်စားပြုမှုသို့မဟုတ်အာမခံချက်ကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်မည်မဟုတ်။ ဤသဘောတူညီချက်တွင်ပါ ၀ င်သောမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမဆိုဤနေရာတွင်မည်သည့်အခွင့်အရေး၊ အာဏာသို့မဟုတ်အခွင့်ထူးကိုမဆိုစွန့်လွှတ်ခြင်းအဖြစ်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ မည်သည့်ပါတီ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုမဆိုပါတီတစ်ခုမှစွန့်လွှတ်ခြင်းသည်နောင်တွင်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သောတူညီသောလုပ်ရပ်တစ်ခုအားစွန့်လွှတ်လိမ့်မည်မဟုတ်။
ချိုးဖောက်မှုအတွက်ကာကွယ်ဆေး။ ဤနေရာတွင်ဆန့်ကျင်သောအရာတစ်စုံတစ်ရာမရှိသော်လည်းပုဒ်မ ၁၀ ကိုမူတည်သည်၊ အကြောင်းမှာပါတီတစ်ခုစီသည်လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်များ၊ အလုပ်ထုတ်ကုန်များနှင့်အခြား ၀ န်ထမ်းများနှင့်သိကျွမ်းခွင့်ရထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤသဘောတူညီချက်အားချိုးဖောက်ပါကပါတီတစ်ခုစီသည်ဤသဘောတူညီချက်နှင့်၎င်း၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုအမိန့်စာ၊ သီးခြားလုပ်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်အခြားမျှတသောသက်သာခွင့်တို့ဖြင့်ချုပ်ဆိုခြင်းမရှိဘဲ၊ ထိုပါတီရနိုင်သောအခြားအခွင့်အရေးများနှင့်ကုစားမှုများအားထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရ။ ဤသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းအတွက်
ရှေ့နေခများ။ ဤသဘောတူညီချက်၏အကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်း။ မည်သည့်တရားစွဲဆိုမှုတွင်မဆိုအနိုင်ရပါတီသည်အခြားသဘောတူညီချက်မှ၎င်း၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကုန်ကျစရိတ်များနှင့်လိုအပ်သောငွေများနှင့်ရှေ့နေများ၏အခကြေးငွေများကိုစုဆောင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အောင်မြင်သောပါတီသည်အခြားပါတီအားစုဆောင်းရန်၊ ကန့်သတ်မထားပါ၊ ကုန်ကျစရိတ်များအပါအ ၀ င်ကုန်ကျစရိတ်များအားလုံးကို ၀ ယ်သူအားပေးရမည်။ ဤသဘောတူညီချက်အရမည်သည့်အခကြေးငွေနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုမဆိုပေးချေပါ။
တစျခုလုံးကိုသဘောတူညီချက်။ ဤသဘောတူညီချက်နှင့်အလုပ်ကြေငြာစာတမ်းများသည်ဤအကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သောပါတီများအားလုံး ၀ နားလည်မှုကိုဖွဲ့စည်းပေးပြီးယင်းအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သောပါတီများအကြားယခင်ပါးစပ်၊
ခေါင်းစဉ်မရ။ ဤကဏ္ sections ၏ခေါင်းစဉ်များကိုကိုးကားရန်အဆင်ပြေစေရန်အတွက်သာထည့်သွင်းထားပြီးဤသဘောတူညီချက်၏မည်သည့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုမှထိန်းချုပ်ခြင်းမပြုရ။
ဆောက်လုပ်ရေးနည်းဥပဒေများမရ။ ဤသဘောတူညီချက်များကိုဂရုတစိုက်ပြန်လည်သုံးသပ်ထားပြီးပါတီတစ်ခုစီသည်သဘောတူကြောင်းနှင့်ဥပဒေအကြံဥာဏ်နှင့်ဖြည့်စွက်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်မူကြမ်းရေးဆွဲရေးပါတီနှင့်မဆန့်ကျင်သောရှင်းလင်းပြတ်သားသောစကားစုများကိုမူကြမ်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်မဟုတ်သောတည်ဆောက်ရေးနည်းဥပဒေတို့နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောအလုပ်ကြေငြာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်မည်သည့်ကိစ္စမဆိုအတိုင်ပင်ခံ၏လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များအားဤသဘောတူညီချက်၏ရည်ရွယ်ချက်အားလုံးအတွက်စာရေးသားသူကလက်ခံကြောင်းမှတ်ယူလိမ့်မည်။
သက်သေခံချက်တွင်၊ ပါတီများသည်အထက်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးရေးသားသည့် နေ့မှစ၍ ဤသဘောတူညီချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။